MOWDUUCYADA:9 Dropshipping Business Name Mistakes to Avoid
Posted By: Fisayo March 16, 2018
Waa maxay Dropshipping?
Sidee Dropshipping Works
First Waxyaabaha First, Your Name Dropshipping Business
Maxaad Waa Muhiim ah si aad u hesho Xuquuqda
5 Cawaaqibta Gaarida Wrong
5 Siyaabaha Quick in Abuuri Fikradaha Name Dropshipping Business
9 Dropshipping Business magacyada Khaladaadka in ilaali
Doorashada magaca ganacsi ee aad dukaanka dropshipping waa ka dooranaya magaca ganacsi ah noocyada kale ee ganacsiga yar ka duwan. Si kastaba ha ahaatee, mabaadiida isku mid codsan, haddii aad hesho ganacsiga qaldan magacaabayo wax badan oo kale tegi kartaa mid aad u qaldan. Tani waa arrin aasaas.
Waxaa jira badan oo ganacsi dropshipping halkaas, 500,000 (iyo tirinta) on Shopify oo keliya baahsan 175 dalalka. magaca aad dukaanka adiga baxay istaagi kara oo ka badnaa iyo boos kuu dropshipping guul ama aad milmaan galay asalka meesha idin Maansheeyo in aanay muuqan.
nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo smart in ay ka fogaadaan jabka iyo bartaan si aad u hesho dukaanka dropshipping ama ganacsi xaq u magacaabayo.
Sababta oo ah waxa ay si fudud si ay u bilaabaan dropshipping, dropshippers u janjeera in ay ka tanaasulaan dukaanka a non-fulinta iyo mid kale oo la furo, laakiin haddii dhibaatada dahsoon waa hannaanka magacaabista ganacsi, markaas u baahan tahay inaad barato sida in ay curiyaan fikrado magaca ganacsi fiican dukaamada dropshipping mustaqbalka.
In this post waxaynnu ku baadhi doonaa tago iyo mooraal doorashada magaca ganacsi ee aad ganacsi dropshipping, laakiin marka hore
Dropshipping waa ecommerce sahaydu model ah ganacsiga u ogolaanaya aadan tafaariiqda oo aan u baahan si ay u iibsadaan stock jireed ama sii inventory.
Hoos waxaa ku qoran sharaxaad kooban oo dropshipping in 5 talaabooyin fudud:
Waxaad muujiyaan saarayaasha ama waxyaabaha qeybiyeyaasha on website aad tafaariiqda ugu Bogani ah,
Shoppers caleenta iyo amarada meel aad la
Waxaad qaadan faa'iidada aad, iyo
amarada macaamiisha Forward si loogu ama saarayaasha aad, kuwaas oo
Oofiya ama si toos ah uga samatabbixin karaa alaabta si ay macaamiishaadu
First Waxyaabaha First: Your Name Dropshipping Business
Wax yar Waxaa aad u baahan tahay si ay u bilaabaan dropshipping sida:
PC ama laptop
xiriir Internet lagu kalsoon yahay
Platform Dropshipping, e.g. Shopify (yimaado magaca domain, iwm), free 14 maalmood maxkamad, bilaabataa $ 29 / mo, $9/mo for Shopify Lite
wax soo saarka A ama Misbaax
qeybiyeyaasha lagu kalsoonaan karo ama saarayaasha
app qalabaynta An sida Oberlo, (pack heleynin lacag la'aan ah), markaas $ 29 / mo, waayo, xirmo aasaasi ah, iwm
laakiin, mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay waa magaca ganacsi fiican oo aad dukaanka dropshipping.
Maxaad Waa Muhiim in ay Hel Right
Sida hore loo sheegay, waxaad bilaabi kartaa dropshipping la macno eber dollars. Taas darteed wax gaar ah ayaa laga qaadayaa, waayo siiyo.
Haddii loo maleeyo in aad u koraan iyo si deg deg ah u qaaddo oo aad hesho dareenka of ciyaaryahano waa weyn, kuwaas oo calaamadaysan magaca pre-taariikhaha iyo idinkaa ekaan, aad ku noqon karo baxda sharci ah, iyo waxa uu noqonayaa mid ka badan oo adag oo lagu dayacayo ganacsi kuu sii kordhaya sababo la xiriira ganacsi arrimaha la xiriira magaca.
Sidaa awgeed aad u baahan tahay si ay u xaq ka bilawga heli. Si aad u Tuur iftiin badan,
halkan waxaa ku qoran
dagaalo Legal laga yaabo in ay wada baabbi'in ganacsigaaga ama aad ku kacaysaa wax badan degsiimada
Loss of saldhig macaamiisha
Loss of pages warbaahinta bulshada la xiriira iyo xisaabaadka
Cusbooneysiinta hantida digital oo dhan si ay u muujiyaan xaaladda cusub
dadaalka magac badalka qaali
Si aad u dhigay in aragtida, wararka ayaa tilmaamaya in isbedelka la soo jeediyay ee magaca ka Uta in TDU (dhawaaqaa t-Dhuux) laga yaabaa inay canshuur Utah qiyaastii $ 50 milyan si ay u hirgeliyaan.
Sidoo kale, cars.com domain ayaa la sheegay in uu ahaa iibiyey $ 872m shir sanadeedkii a.
Isagoo sheegay in,
Hadda oo aad ogtahay muhiimadda ay leedahay in aad dropshipping magaca ganacsiga xaq u, halkan waa 5 siyaabo deg deg ah in la abuuro ganacsi ama shirkad qurux fikrado magaca:
Magaca Ganacsiga dhaliyaha
A matoor magaca ganacsi sida magacaba ka muuqata waa software internetka ama qalab kaa caawinaya in aad u curiyaan fikrado magaca ganacsi waayo, aad dukaanka dropshipping, sidaa darteed uma baahnid inaad gacanta ku samayn.
Quora waa a caan ah oo Q&forum A halkaas oo xubnaha weydiiso xubnaha su'aalaha iyo jawaabaha ku saabsan mowduuca kasta. Waxaa jira feature ah upvote u ogolaanaya xubnaha kale ee suulka ama taageero jawaabo siiyey xubnaha. Waxay kaa caawin karaan fikrado aad dukaanka dropshipping.
Qoyska iyo Friends
Haddii aad doonayso in uu ordo dukaanka dropshipping Hooyo n 'Pop style a, saaxiibada iyo qoyska helitaanka talooyin magaca ganacsiga waa hab xiiso leh si ay u bilaabaan soo baxay.
dhab ahaan in aad soo afjari karo la magac runtii qabow in kooban tilmaamaya ganacsiga dropshipping.
Marka laga soo tago qoyska iyo saaxiibada, qayblibaaxna badnaa aad u ogolaanaya il fikrado magaca shirkada dadkii badnaa ka mid ah wariyeyaasha madaxa tayo lacag.
Waxaa jira goobo badan oo kuwan oo kale ah CrowdSpring, Fiverr, Upwork, iwm.
Ikhtiyaar kale waa inuu shaqaalayaal u kireeyo copywriters ganacsi xirfad leh ama hay'adaha wax kasi karo gool ganacsi iyo ujeeddooyinka iyo kusaabsan farsamada magacyada ganacsi sida.
Hadda oo aannu aragnay qaar ka mid ah siyaabaha in ay curiyaan magacyada ganacsi,
halkan waxaa ku qoran,
9 Dropshipping Business magacyada Khaladaadka in ilaali at Qiimaha All
Doorashada Name in Sanqadhaha sida Amazon
haa, aynu wada ognahay Amazon waa heshiis weyn, keeno carqalad weyn ku tafaariiqda iyo liqidda ku dhawaad ​​wax kasta oo ay waddo.
Laakiin iyadoo la isticmaalayo magaca la Amazon waxa ku jira waxaa laga yaabaa in marin habaabin ah oo laga yaabaa in waxkasta ka xaglo kala duwan sida Amazon dhabta ah, shoppers online iyo sharciga.
Oo ay ku jiraan Dropshipping Word ee Your Name
Waxaa jira aragti guud in dropshipped waxyaabaha ku kici badan oo ku saabsan celcelis. Tan waxa u sabab inta badan si ay u iibsato qiimo tafaariiqda iyo tiro taas oo ka dhigaysa mid adag in dropshippers inay iska iibiso oo aan Bogani ah.
Ku darista dropshipping erayga (ama kala duwanaansho ay kale) magacaaga ganacsiga diri karaan calaamadaha qaldan oo ku saabsan qiimaha aad baxshay,.
Isticmaalka Magacyada Geo-xakamaynayo
Isticmaalka magac la mid ah DropshipTexas abuuri doonaa aragti ah in aad kaliya ku shaqeeyso ama dhiibin Texas. Tani eryi doonaa macaamiisha kuwaas oo aan ku noolayn ama agagaarka Texas.
Dropshipping kuu ogolaanayaa inaad dunida ka iibiso sidaa darteed ha ku xerin gacmahaaga magac juquraafi xakamaynayo.
Magacaabayo Your Store ka dib Misbaaxuna
niches dropshipping qaarkood waa aalladda xilliyeed, halkan joogo oo way iska tageen xiga. Magaca aad dukaanka dropshipping ka dib markii niches sida aad yareysey, iyo qalad halis ah si looga fogaado wax kharash ah oo dhan.
Magac wanaagsan waa in laguu ogolaado in aad isku dayi niches kala duwan ee wax soo saarka dropshipped oo aan u baahan in la badalo magaca dukaan badanaa.
Doorashada Name a Iyadoo Laga bilaabo maskax Small
Tani waa ka Misbaax-magacyada kala duwan. Sababo la caasimada xawaaladaha hooseeyo dropshipping ee, dropshippers qaar ka dooran magaca shirkada la xanuujin "yar" maskax ganacsi.
Sidaas awgeed, marka koritaanka yimaado waxaa laga yaabaa in ay u baahan yihiin isbedel magaca kaas oo ka yimaadaa caqabadaha ay a.
Isticmaalka Magaca hanti si Your lahjad
Isticmaalka magaca hanti aad qabiilka, carrabka ama dadka laga yaabaa in aanay noqon fiican ee ganacsigaaga dropshipping.
Haddii aad qabto in la yidhaahdo iyo higgaadda magaca soo baxay dadka mar kasta oo, ka dibna waxa uu u badan tahay in aan ku qaboojiyo ku filan.
Dhibaato higaada Your Name Dropshipping Store
Haddii aad soo qaado magacyada hanti aad lahjad caqabad kale oo ay noqon doontaa fududaato higaada ama dhawaaq aan hooyo ku hadla ee aad lahjad.
Tani waxay noqon kartaa muuqaalka yar ee natiijooyinka raadinta iyo gaadiidka organic kuwaas oo aad u baahan tahay si ay u koraan aad dukaanka.
Waad tirka Macaamiisha Caalamiga ah
Maxaa yeelay, dropshipping kuu ogolaanayaa inaad dunida ka iibiso iyo kasban sarifka lacagaha qalaad, aad u baahan tahay si ay u eegaan macaamiisha aad dalalka kale iyo dhaqamada.
In magaca ganacsiga, malana micnaheedu noqon karaa "dahabka" ee lahjad oo macnaheedu "shire" luqad kale, taas oo macnaheedu yahay way karhaan doonaa aad dukaanka. Sidaas sameeyo cilmi.
Qeybiyeyaasha Misspell Your Name on Invoice ama Baako kale Product
Haddii magaca aad dukaanka dropshipping waa adag tahay in muddo, qeybiyeyaasha waxaa misspell laga yaabaa in biilka ama baakadaha wax soo saarka, kaas oo u xun tahay sunti doonaa sida laba badeecadaha ka soo jeeda laba qeybiyeyaasha laga yaabaa in magacaaga duwan muddo.
Macaamiisha laga yaabaa in ay isku halleeya, haddii ay si joogto ah u soo celin. Hubi in aad magaca ganacsiga saxda ah la gudbiyo si loogu.
Helitaanka aad dropshipping magaca ganacsiga midig ay ku badbaadin doonaa stress aan loo baahnayn iyo ka welwelin. Raac talooyinkan si ay si fiican fikradaha magaca ganacsiga wakhti soo socda.
Amos Onwukwe waa AWAI ah u tababaran Ecommerce B2B / Copywriter B2C saftay eCommerce Fahanka, Ecommerce Nation, Ecommerce Understanding, SmallBizCub, xawaaladaha Successful 101, Man Little carrab la ', Huffington Post, Floship, Natiijo First, Qaadada Next The, SABTrends, BusinessTips.Ph ku xuso dhowr ah.
Isagu waa laga heli karaa kiro
Be the first to comment on "9 Dropshipping Khaladaadka Name Business inay Iska ilaali at Qiimaha All"